साउथ फिल्म भयो मतदान, झडप, तोडफोड र फायरले ठाउँ ठाउँमा स्थगित, दर्जनौ घाइते (भिडियो) – Sanghiya Online
Posted on : May 13, 2022 May 13, 2022 - No Comment
३० वैशाख, काठमाडौं । जुम्लाको गुठचौर गाउँपालिका-३ गज्यांकोटस्थित शंकर बहुउद्देश्यीय माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपका क्रममा सहायक मतदान अधिकृत रवि भण्डारीको घुँडामा चोट लागेको छ।
त्यसैगरी जुम्लाको गुठचौर गाउँपालिका-३ गज्यांकोटस्थित शंकर बहुउद्देश्यीय माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपका क्रममा सहायक मतदान अधिकृत रवि भण्डारीको घुँडामा चोट लागेको छ।
यता सप्तरीको डाकेश्वरीमा निर्वाचन स्थगित हुने भएको छ । निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार आक्रोशित समूहले मतपेटिका फोडेर मतपत्र छरिएपछि निर्वाचन स्थगित हुने भएको हो । तर स्थगितको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । ‘त्यहाँ मतपत्र छरिएको छ । सबै मतपत्र बटुल्दा पनि असन्तुष्ट पक्षले विश्वास गर्ने र फेरि मतदान चालु गरेर आजै टुंग्याउने अवस्था रहेन’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । आज सम्भव हुँदैन ।’
उता हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ स्थित मालिका मावि मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ । झडपमा १० जना घाइते भएका छन् ।
इच्छ्याएको व्यक्तिको नाममा भोट कसले हाल्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका कार्यकर्ता र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो l
त्यसैगरी रौतहटको गढीमाई नगरपालिका-३ लक्ष्मीपुरस्थित खरिदी प्रावि मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ । उम्मेदवारहरुका समर्थक बीच भएको विवाद झडपमा परिणत हुँदा १५ जना घाइते भएका हुन् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल नै प्रयोग गर्नु परेको थियो । यस्तै गढीमाई नगरपालिका-६ सिंगारवनमा नेकपा समाजवादीका वडाध्यक्षका उम्मेदवार रामविनोद यादवको मोटरसाइकलमा आगजनी भएको हो।
यता फर्जी मतका विषयमा विवाद हुँदा साँफेबगर नगरपालिका–११ बाब्लामा मतदानस्थलमा झडपका क्रममा तीन जना घाइते भएका छन् ।
कांग्रेस–समाजवादी गठबन्धन र नेकपा (एमाले) पक्ष बीचमा झडपका क्रममा शिक्षक तिलक कुँवरसहित तीन जना घाइते भएका स्थानीय मिनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ढुंगा प्रहारबाट टाउकोमा चोट लागेका तिलकसहित तीनै जनाको वयलपाटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । धनकुटा । मतदान प्रक्रियाको विषयमा लोकतान्त्रिक गठवन्धन र नेकपा एमालेका प्रतिनिधिबी विवाद हुँदा सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित ठाकुरदेवी मावि र ६ नं. वडा कार्यालय मतदान स्थलका तीन वटै केन्द्रको मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-९ स्थित विषहरपुर मतदान केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ । एक जना मतदाताको साथबाट दुई वटा मतपत्र फेला परेपछी विवाद चर्किएको थियो ।
बझाङको मष्टा गाउँपालिका-५ द्वारिकानाथ आधारभूत विद्यालयमा चार पटक सम्म झडप भएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले वृद्धवृद्धा मतदाताको मत आफैं हालिदिएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएपछि पटक पटक झडप भएको हो । झडप भए पनि मतदान स्थगित भएको छैन ।
त्यसैगरी पाँचखाल नगरपालिका-१३ मा मतदान स्थलमा तोडफोड भएको छ ।सीता माध्यामिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले नेकपा एमालेसम्वद्ध एक जनालाई ४ वटा मतपत्र दिएको भन्दै गठबन्धनका दलहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले मतदान स्थलमा राखिएको डेक्सबेञ्च तोडफोड गरेका छन् । अहिले मतदान स्थगित गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीचको विवादका कारण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–६ को बालकी आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ । माओवादी कार्यकर्ताले लाठी लिएर आएको विषयमा दुई पार्टीबीच विवाद भएपछि केही समयलाई मतदान प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो ।
बिपक्षीले बदनाम गर्दै विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री ओली एसियाकै उत्कृष्ट नेतामा छनोट
चुनाब गराउन प्रहरी प्रशासनको नया खेल ,राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी गलत आरोप लगाउदै मोर्चाका नेताहरुलाई खोरमा थुन्दै
वडा न. ८ खुल्ने बितिकै बालेन भन्दा सिर्जना सिंह धेरै अगाडी, मत गणक नै आश्चर्यचकित